Kasị Mma stlọ ahịa Skincare Ngwaahịa Dị ka Onye na-ahụ maka ọgwụ na anụ ahụ - PureWow - Mma
Ndị Nweta Ga-Ahụ Ezi Ntụziaka Ngwa Ibu Ibu Ntutu Isi Ndị Ọzọ Mma Ejiji Agbamakwụkwọ Akpụkpọ Anụ
Ndị a bụ Ngwaahịa Nlekọta Ahụike Kasị Mma, Dị ka Onye na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa
Dika anyi n’acho mmuta na iguta banyere akpukpo aru, otutu ihe omumu nwere ike ibu obere oke-obughi ikwuputa oke onu. Youkwesiri ịmefu ọtụtụ narị dollar na ngwaahịa ndị na-arụ ọrụ n'ezie? Emela, nke bụ ya mere anyị ji nyochaa Elizabeth Mullans, MD, onye dọkịta na-ahụ maka ihe banyere ọrịa na Uptown Dermatology na Houston, Texas, maka ọkacha mmasị ya na-ere ahịa ọgwụ ika-elekọta họpụta mmadụ.
Njikọ : 10 Clean Beauty Products na Anyị Fall Wish List
kacha mma ịhụnanya nkiri na bekee
CeraVe Hydrating Ihu ihu
Anyị kwesịrị ịdị ọcha ihu anyị nke ọma tupu itinye nlekọta anụ ọ bụla, nri? Nri. Ma olee ụzọ kachasị mma? Kwa Dr. Mullans, nke a Cerava ihe nchacha anaghị ewe iwe ma ghara ihicha, ma wepu ihe niile metụtara etemeete. Oh, na maka ihe ọ bara uru, ọ na-enweghịkwa ísì ụtọ.
Zụta ya ($ 14)
Toner Neutrogena Mmanya Na-aba n'Anya
Emechaa nhicha, toner na-eweghachi hydration ma na-eme ka ọkwa nke pH akpụkpọ gị dịghachi, na-eme ka ọ dị mfe ịmịkọta mmiri na ude. Nke a anaghị akpata iwe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka ndị nwere akpụkpọ anụ. Ọ bụrụ na nke gị bụ mmanu mmanu, Dr. Mullans na-atụ aro ka otu toner na amoosu hazel (dị ka onye a sitere na Thayer's ).
Zụta ya ($ 6)
Differin jel 0.1%
Ihe ndị a na-adị naanị site na ndenye ọgwụ mana a na-ere ya ugbu a na tebụl. Kwa Dr. Mullans, nke a siri ike karịa retinol, ma nwee mmetụta abụọ: ikpuchi pores na ịrụzi mmebi nke anyanwụ gara aga, nke na-akpata ahịrị ọma na wrinkles. N'ihi na o siri ike, naanị ị ga - eji ego pea maka ihu gị dum - ma ghara iji ya na anya gị. Ọ na-atụ aro ka ịmalite iji ya abalị atọ n'izu, ma jiri nwayọ na-abawanye kwa abalị iji gbochie iwe.
Zụta ya ($ 10)
RoC Correxion Ude Anya
Maka ihe na - adịghị mma n’anya, Dr. Mullans bụ onye na - akwado ude ude a na - adịghị ọnụ, nke edobere maka anya nwere mmetụta na retinol nwere iji nyere aka dozie ahịrị ọma na wrinkles.
Zụta ya ($ 16)
Dị ka Dr. Mullans si kwuo, usoro gel a na-egbochi akọrọ na-enweghị ikpuchi oghere ma banye n'ime akpụkpọ ahụ ngwa ngwa na-ahapụghị ihe fọdụrụ. O zuru oke maka ojiji nke afọ, mana ọ kachasị mma n'oge okpomọkụ n'ihi mmetụta jụrụ oyi nke gel.
LaRoche Posay Anthelios Ultra-Light Fluid Ihu Igwe ihu ihu na-eche ihu SPF 60
Ọ dịghị mkpa ka anyị gwa gị mkpa ọ dị iyi ihe mkpuchi anwụ kwa ụbọchị, mana anyị nwere ike ịgwa gị nke na-abịa akara akara nkwado nke onye na-ahụ maka ọgwụ. Nke a, ọ na-agwa anyị, na-etinye uche ngwa ngwa na-ahapụghị ihe fọdụrụ chalky n'azụ.
Zụta ya ($ 30)
Isi nke Isi, Akpụkpọ, na Ntu Vitafusion
Obere gummies a nwere biotin, nke na - akwalite ahụike ahụike ma na - eme ka ntutu na ntu ntu, yana antioxidants ndị dị mkpa maka ahụike zuru oke. Dr. Mullans na-agbakwụnye na, ebe ọ bụ na ha bụ gummies, ọ dị mfe ịnara-ma dị ụtọ karịa mbadamba nkume ma ọ bụ capsules.
Zụta ya ($ 12)
Njikọ : Gịnị Mere Ndị Ọkachamara Nlekọta Ahụ Ji Hụ Ndị Ọcha Mmanụ Anya?
Categories Ndị Ọzọ Nddị Teknụzụ
n'elu gosiri ihunanya Hollywood fim
edozi isi na ntutu ntutu
esi eme ka ntutu dị na ntutu
soda soda akpụkpọ whitening ịgba akwụkwọ
ndepụta ndepụta nke eserese na foto
almond mmanụ uru maka ntutu
ụzọ ntutu isi n'ụlọ